आया राम, गया राम
श्री ५ को सरकार नेपाल सरकार बन्यो । राजालाई किनारा लगाइयो, हिन्दुधर्मको ठाउ“मा धर्मनिरपेक्षता भनियो । संघीयता अपनाइयो । यी सब परिवर्तनको अर्थ के हो ? समृद्धि र सुशासन, सुखी नेपाली एकमात्र उद्देश्य भनियो । आमनागरिक सुखी भए त ? देश समृद्धितिर लाग्यो कि लागेन ? सुशासन कायम भएको छ कि छैन ? यी यस्ता प्रश्नहरु हुन्, जसले देशको परिवर्तनलाई व्याख्या गर्छन्, औचित्य शिद्ध गर्छन् । यी प्रश्नहरुको सकारात्मक जवाफ नआएपछि भन्नैपर्छ, जे परिवर्तनहरु भए, ती सार्थक हुनसकेका छैनन् । परिवर्तनलाई आमनागरिकले अपनत्व ग्रहण गरेका भए परिवर्तन सार्थक हुनेथियो, यसकारण परिवर्तन आया राम गया राममा सिमित भयो भन्नैपर्छ ।
आमनागरिकले खोजेको नागरिकले पाउनै पर्ने लोककल्याणकारी प्राथमिकताहरु हुन् । नागरिकले ती प्राथमिकता केही पनि पाउन सकेनन् र घूस नदिई कुनै पनि नागरिक काम हुन छाडेका छन् । यहा“सम्म कि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तीमा मात्र होइन, सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरु न्यायोचित हुनसकेन भनेर संसदमै चर्चा सुरु भएका छन् । यसबाट पनि भन्न सकिन्छ कि विधिको शासन चलेको छैन । खोजेको विधिको शासन हो, समानता र मानवाधिकारको संरक्षण हो । जब अन्याय बढेको अनुभूति हुन्छ, जब न्याय पाइन्न भन्ने नागरिकले सोच्न थाल्छ, तव पद्धतिको नाम लोकतन्त्र भए पनि त्यो आशंकामा पर्छ । यतिबेला नेपालले अ“गालेको लोकतान्त्रिक पद्धति यक्षप्रश्नमा उभिन पुगेको छ, यसबारेमा पद्धति लागू गर्ने सबैको ध्यान यतातिर जानैपर्छ ।
जुनसुकै पद्धति होस्, कानुन बलियो भएर चल्ने होइन रहेछ । संविधान जतिसुकै उत्कृष्ठ भएर पनि पद्धति चल्ने होइन रहेछ । आमनागरिकले अ“गाकार नै नगरिदिएपछि जतिसुकै अङ्गबस्त्र राम्रो भएर पनि के गर्नु र ? नागरिकले स्वीकार गरेपछि सबै राम्रो हुनेरहेछ । संविधानप्रति नागरिकको राम्रो धारणा छैन, यो लुटतन्त्र भनिरहेका छन् । नागरिकले यसो भन्नु भनेको संविधानका कार्यान्वयनकर्ताहरु, जवाफदेही लिनुपर्ने नागरिकका प्रतिनिधिहरु, राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारहरु नैतिक तहमा खरो उत्रिन सकेका छैनन् भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । बलियो संविधान होइन, बलियो जनताका प्रतिनिधि, देश सञ्चालकहरुमा नैतिकतासहितको इच्छाशक्ति बलियो हुनुपर्ने रहेछ । आज देशमा खड्किएको विषय नै यही हो र पहिलो सर्त नै नैतिक धरातल बलियो हुनुपर्ने देखियो ।